Ilokishi yaseGuo'ao iJiankou Mijia, iMutianyu, iJiankou, iLake Xiangshui, iTempile yaseHongluo, iLing Foshan, igumbi lokuhlambela elizimeleyo eline-air-conditioning, ukupheka kunye nebhodwe eshushu yebarbecue, inokuhlala malunga nabantu abayi-8. - I-Airbnb
Ilokishi yaseGuo'ao iJiankou Mijia, iMutianyu, iJiankou, iLake Xiangshui, iTempile yaseHongluo, iLing Foshan, igumbi lokuhlambela elizimeleyo eline-air-conditioning, ukupheka kunye nebhodwe eshushu yebarbecue, inokuhlala malunga nabantu abayi-8.
Indlu eyenziwe ngomhlaba sinombuki zindwendwe ongu陈
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike u陈 iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Siyiyadi enkulu ye-350 square metres, kubandakanywa namagumbi asemgangathweni angama-4 anamagumbi okuhlambela ahlukeneyo, indlu yesibhakabhaka ekhanyayo, ikhitshi, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala, kunye neyadi enkulu (iyadi ineentente zodidi zamaRoma kunye nenkcazo ephezulu. kwelivi smart, amawaka blockbusters bhanya, amashumi amawaka uthotho TV kunye neenkqubo ezahlukeneyo zokuzonwabisa) ngokupheleleyo super-star emine kunye nemigangatho igumbi mmiselo ungentla, igumbi ngalinye lixhotyiswe air conditioning, WiFi engenazingcingo, LCD TV, isebenzisa igumbi indalo bamboo ibhrashi amalahle, Intlama, ishampu, conditioner, ageze umzimba onke amazwe.
Ekhitshini, ioli, ityuwa, i-sauce, iviniga, irayisi, i-noodles, i-sauces kunye nezinye i-seasonings zemihla ngemihla zigqityiwe (igumbi lokuhlala lixhotyiswe ngewayini ebomvu yase-Italiya, iwayini ebomvu yaseFransi, iwayini yaseSpain, ibhiya emnyama yaseJamani kunye nebhiya ephuzi. ).
Kukwakho nee-oveni zokutya kwasentshona, oomatshini bekofu abazenzelayo abasuka eItali, oomatshini bezonka, iijusi, oomatshini bobisi lwesoya, izipheko zerayisi, izipheko zokungenisa izinto, ii-oveni zemicrowave, kunye neendawo zokuthengisela iikeyiki zombane.
Kukwakho neegriki zebarbecue zangaphandle.Ungazisa ezona zitya ozithandayo ebaleni ukuze uziphekele, okanye ungenza imbiza eshushu.
[Indawo esebaleni]: Ilali yaseTianxianyu Guoao enguNombolo 20
[Inani leesuites]: amagumbi okulala ama-4, amagumbi okuhlambela ama-4, iiholo ezi-2
Umthi weSiqhamo se-Xiaoyuan】: imithi ye-toon emi-2, imithi ye-walnut emi-2, imithi yejujube emi-2, imithi yamapere e-1, imithi yepepile e-1, imithi yeapile e-1, imithi yecherry e-1, imithi yeapilkosi eyi-1
Ibhedi enkulu yobusi: enye 2m *2m (iibhedi ezi-2 zabantu abangabodwa kunye)
Ibhedi yesofa (inokusetyenziswa njengebhedi ephindwe kabini eyi-1.7m)
Isitulo esikhulu sokuphulula sombane
Kukho iiseti ezintathu zee-suites ezincinci
Iibhedi ezimbini zobusi: enye yi-1.8m *2m
Ubusi ibhedi ezintathu: enye 1.8m *2m
Iibhedi ezine zobusi: enye 2 yeemitha * 2 yeemitha (2 iibhedi ezingatshatanga kunye)
I-Honey Five Star Sky House: imitha eyi-1 * 2 yeemitha
Isofa imitha eyi-1 * 2 yeemitha (inokusetyenziswa njengebhedi enye)
Iyakwazi ukuhlalisa ukuya kuthi ga kwi-11-12 yabantu abadala + abantwana aba-4
I-Huairou yeyona idumileyo, ewe, yiJinzunyu, kwaye iTianxianyu yenye yeelali zokuqala eBeijing ukuzala i-trout yegolide.Iintlanzi apha zonke zikhuliswa emanzini aphilayo, kwaye ungathatha abantwana bakho bayokutya (intlanzi enye, ezintathu iluhlaza ingadliwa, nokuba igcadiwe, yathamba kwi isuphu), uhambo olufanelekileyo. Le lali ijikelezwe ziintaba kumacala amathathu, kwaye emva kwayo kukho iFoshan enkulu eleleyo.Ungaya kwindlela yeplanga yeplanga ukuze ubone umlambo ogqumayo kunye nomthunzi wemithi eluhlaza.Ungaya nakwindawo yokuloba ukuze ujabulele umzuzu ozolileyo wokuloba.
Ilali yaseTianxianyu isemazantsi eJiankou Great Wall kwaye kwicala elingasentshona leMutianyu Great Wall. Ukuma kwilali, unokubona ngokucacileyo uDonga olukhulu olubekwe encotsheni yenduli. unyawo uDonga Olukhulu, kukho a lokuphola elikhethekileyo kunye noluntu care abadala.
Apha ingqongwe iintaba, 100 kwendlela iplanga ngomthi, amanzi ezintabeni spring, abantu belali ezilula, iintendelezo yamandulo, imigangatho-star ezine mihla, iintendelezo ezincinane cwaka kakhulu, yaye enyulu imifuno eluhlaza ukuba bakhule nakwiintendelezo ezincinane ukusela. Wofo nguye ukhetho lokuqala lononophelo oluqhelekileyo lwabantu abadala kunye nokuzonwabisa.
Kwicala elingasempuma yeyadi, unokunyuka uye kwi-pavilion encinci yentaba kwidolophana (bobabini abadala kunye nabantwana banokunyuka), bejongene neendawo ezintle zelali yonke, kunye nombono we-panoramic weFoshan, i-Jiankou Great Wall kunye ne-Mutianyu. Great Wall, apha ochazwa ngokuba emyezweni ubusi Ekhaya umva.
Umbuki zindwendwe ngu- 陈
Ndiyathanda ukunxibelelana nabaqeshi, kwaye ndihloniphe izimvo zabo kwaye ndigcine ubumfihlo bomntu.Ndinganxibelelana ngefowuni okanye nge-imeyile.